Homeसमाचारसुन्दा अ’चम्म लाग्ला तर यो सत्य हो, पल शाहले गरे वि’बाह ! को हुन् त बेहुली? (भिडियो सहित)
April 23, 2021 admin समाचार 4829
यो दृश्य हो बाग’लुङको हाे उनी दुर्गेश थापा सँगै उनको घर गाएका थिए। दुर्गेश पढेको स्कुलमा ना’एक पल शाहलाइ सम्मान कार्यक्रम गरिएको थयो। कार्यक्रममा पल शाह, समीक्षा अधिकारी, सागर,वसन्त थापा, दुर्गेश थापा ल’गाएत अन्य कला’कारहरु पनी थिए।
कार्यक्रममा पूरै गाउँलेहरूले उनीहरुलाई बजा’गजा सहित माला लगाएर बेहुला जस्तै ब’नाएर डोली चढाएर बाटोमै आएर स्कूल सम्म पु’र्याएका थिए। उनले भनेका छन् दुर्गेश र म पहिले सा’थी थियौं तर आहिले हामि एउटै परी’वार जस्तै भएका छौं। हामि दाजू भाइ भए’काछौं भनेका छन्।
कार्यक्रममा समीक्षा अ’धिकारी,दुर्गेश थापाले पनी आफ्नो प्रस्तु’ती दिएका थिए। उनीहरु दुई दिन बसेर काठमाडौं फर्केका हुन फर्कने बेला पलले फेरि आउँछु भन्ने व’चन दिएका छन् र आफुलाई कार्यक्रमका बोलाएकोमा खु’सी वेक्त गरेका छन्। इताजा खबरबाट
छवि-शिल्पा का’ण्डका कारण नि’लम्बित रजतपटको स्पष्टीकरण (भिडियो हे’र्नुहोस)
December 24, 2020 admin समाचार 8779
नायिका पुजा शर्माको जन्म २०४९ बैशाख् १८ गते सिन्धुपा’ल्चोक जिल्ला’मा भएको हो । उनले नेपाली कथानाक चलचि’त्र थ्रि लबरबाट यस क्षेत्रमा प्र’वेश गरेकी हुन् । चलचित्र थ्रि लबर को निर्दे’शक चलचित्र पत्रकार सुरेश दर्पन पोख्रेल
हेर्नुहोस यस्तो छ – आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
June 21, 2021 admin समाचार 4732
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोम’बारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ । तो’केको विनिमय दर अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११७ रुपैयाँ ८८ पैसा र बि’क्रीदर ११८ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको छ ।
March 21, 2021 admin समाचार 5430
नेपालमा आजकल हरेक दिन न’राम्रा खबरहरु एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका छन । कहिले ह ‘त्या कहिले आ त्म’ ह त्या कहिले चोरी त कहिले लु& ट पाट । संक’टकाल सकिएपछि शान्त बनेको नेपालमा कहिलेकाही न’सोचेको